Ogaden News Agency (ONA) – Filim iyo Warbixintii Shirkii weynaa ee ka dhacay Sweden ey ka soo qeyb galeen Suxufiyiinta Sweden
Filim iyo Warbixintii Shirkii weynaa ee ka dhacay Sweden ey ka soo qeyb galeen Suxufiyiinta Sweden
Kulan aad u balaadhan oo ay soo agaasintay jaaliyada Ogadeniya ee Sweden iyo qeybaha bulshada sida ururka haweenka & OYSU-Sweden ayaa ka dhacay magaala madaxda Stockholm ee dalka Sweden.
Shirka oo ahaa mid mudo lagasoo shaqaynayay sifiicana loosoo agaasimay ayaa ugu horayntiiba waxaa furtay halganto Sharezad Faisal Gas oo daadihinaysay shirka.
Waxay bulshada u sheegtay ujeedada shirka & ahmiyada uu xambaarsan yahay.
Kulanku waxuu isugu jiray bandhig faneed cayaaraha hidaha & dhaqanka ay ururka OYSU-Sweden kusoo bandhigayeen & marti sharaf kasooqeybgashay oo kamid ahaayeen suxufiyiintii reer Sweden Martin & Johan oo warbixino kooban ka bixinayay xaalada Ogadenia.
Sharezad ayaa codbaahiyaha kusoo dhaweeysay halgame Amiin Barkhadle asagoo si qota dheer uga warbixiyay taariikhda Ogadenia.
Kadib Halganto Cibaado M Taribi ayaa kasoo jeedisay gabay qiima badan. Sidoo kale waxaa madasha shirka joogay Xildhibaan Riyaale Xaamud oo asagana kaalin aad muhiim u ahayd ka hadlay, asagoo diirada saaray marxalada xunee gumaysi ee Ogadenia ku jirto, Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka warbixiyay sida arxan darada ah & cadaalad darada ay ula dhaqmeen ciidamada gumaysiga xiligii uula shaqaynayay ee uu ka ahaa xildhiban ka tirsanaa dawlada Ethiopia, waxuu carabka ku adkeeyay xukuumada Ethiopia inaysan waligeed cadaalad noqonayn nololna aysan u ogolaanayn shacabka Ogadenia sidaa darteed dagaal gobanima doon inaan sinaba lagu huraynin ee haloo kaco dalka dhamaan bulshooy, intaasi waa hadalkii xildhibaanka oo aynu soo koobnay.
Waxaa codbaahiyaha lagusoo dhaweeyay suxufiyiintii oo ahaa kuwo warkooda aad loo xiisaynayay.
Buug Suxufiyiinta Sweden ay ka qoreen Ogadeniya
Ugu horaynba suxufiyiinta waxay ka afeefteen inay war bixin kooban bixinayaan isla mar ahaantaana su’aalo kooban la weeydiiyo, maadaama bay dhaheen aanu buug ka qornay xaalada Ogadenia si qota dheer oo walibana faahfaahsan ma doonayno inaan buugii ka hor dhacno, balse anagoo tix galinayna shacabka dulman ee raba inay wax ka ogaadaan dhulkoodii hooyo warbixin in aad ku qanacdaan waanu idin siinaynaa.
Su’aalahii la weeydiinayay waxaa ka mid ahaa sida loola dhaqmay kolkii ay Ethiopia tageen?
Ciidamada jidh dilka u gaystay ma milataryga Itobiya ayay ahaayeen mise kuwa liyu bolis?
Waxay sheegeen inay dhibaato fara badan la kulmeen aadna loogu jidh dilay, waxay sheegeen dhibaatada ugu badan & jidh dilka kuwa u gaysanayay inay ahaayeen liyu bolis, inay intay dhulka jiifiyeen ayku tunteen sidoo kale inay filim beena ay ku dul jileen iyagoo iska dhigaya inay ONLF & liyu bolis dagaalamayaan, qaarbaa intay isdaadiyaan iska dhigayay mayd dhintay.
Warbixinadaas oo faahfaahsan & kuwo kaloo badanba waxaan kusoo bandhigi doonaa buuganaga soo bixi doona sumerka.
Su’aal kale ayaa waxay ahayd waxa ay hada damacsan yihiin maadaama xaalada cakiran ee Ogadenia caalamkana loodiiday inay arkaan ay ayaga nasiib u yeesheen inay wax ka ogaadaan?
Waxay ku jawaabeen waxaanu ku han weeynahay inaan dareenkanaga oo dhan aynu siino Ogadenia, soona bandhigno dhibaatada ay Ethiopia ku hayso Ogadenia.
Sidoo kale waxaanu rajaynaynaa inaan tagno Ogadenia oo xor ah kadibna caana geelna aanu kasoo cabno, waa siday hadalka u dhigeene.
Su’aalahaas & kuwo kaloo aad u badnaaba waxay uga jawaabeen si habsamiya ayagoo ku celceliyay wax badan inay buugooda kusoo bandhigi doonaan.
Kadib ururka haweenka ayaa gudoonsiiyay hadiyad qiima badan oo ay ugu tala galeen labada suxufi.
Waxay aad ugu farxeen suxufiyiintu hadiyadii la gudoonsiiyay ugana mahad celiyeen ururka haweenka ayagoo ku celcelinaya waan rajaynaynaa maraan fogayn inaan Ogadenia kuwada kulano, hada waxii ka dambeeyana waxaanu noqonay qoys oo kale waana kasoo qayb galaynaa kulamadiina quruxda badan.
Gabagabadii & gunaanadkii halkaas waxaa barnaamij halkaas Hidaha iyo dhaqanka ah kusoo bandhigay ururka OYSU gaar ahaan cayaarahii hidaha & dhaqanka (DHAANTO)
Shirka oo ahaa mid aad u heer sareeya ujeeda fogna lahaa ayaa waxuu kusoo gabagabooyay farxad & rayn rayn.